किन बाहिरिए राजकुमार ह्यारी राजपरिवारबाट?
नेपाल लाइभ मंगलबार, पुस २९, २०७६, ०७:३०
काठमाडौं- पछिल्लो समय एउटा विषयले विश्वको ध्यान खिचिरहेको छ, त्यो हो बेलायती राजकुमार ह्यारीको राजपरिवारको भूमिकाबाट बहिर्गमन हुने घोषणा। यस विषयले विशेषगरी बेलायतमा ठूलो हलचल निम्त्याएको छ।
ह्यारी सन् १९८४ सेप्टेम्बर १५ मा सेन्टमेरिज हस्पिटल, प्याडिङ्टनमा आमा डायना र बुबा चार्ल्सको दोस्रो सन्तानको रुपमा जन्मिए। उनको नामकरण ‘प्रिन्स हेनरी चाल्र्स अल्बर्ट डेभिड’ का रुपमा गरियो। तर परिवार र साथीभाइबीच ह्यारीका नामले चिनिन थाले। १९९६ मा आमा डायनाको कार दुर्घटनामा मृत्यु भयो। त्यसपछि सन् २०१७ मा दि टेलिग्राफलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले आमाको मृत्युपछि आफूमा मानसिक समस्या देखिन थालेको बताएका थिए।
सन् २०१८ मा उनले अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मर्केलसँग विवाह गरे। उनको विवाहको विषयलाई लिएर केही सकारात्मक हल्ला चले भने केही नकारात्मक। उनीहरूको विवाहको प्रसङ्ग बाहिर आएसँगै विभिन्न मिडियाहरुले मेगनको जातियतामाथि पनि प्रश्न नउठाएका भने होइनन्। त्यसबेलादेखि नै मिडियाप्रति उनीहरूको वितृष्णा जागेको थियो।
मेगनका पछिल्ला अन्तर्वार्तामा राजपरिवारप्रति आफ्नो उत्कट इच्छा नभएको बताउँदै आएकी थिइन्। ह्यारीले पनि आफूलाई उपाधीको कुनै आश नभएको र मिडियाहरूबाट पनि सँधै टाढा हुन खोज्ने आफ्नो स्वभाव भएको बताउँदै आएका छन्। राजगद्दीको वरियताको आधारमै हेर्ने हो भने पनि ह्यारी छैटौं स्थानमा पर्छन्।
यस्तो छ राजपरिवारको वरियताक्रम
पछिल्ला केही महिना उनीहरू आफ्नो छोरो आर्चीसँगै क्यानडामा बस्दै आएका थिए। ह्यारी र मेगनका अनुसार राजपरिवार बहिर्गमनको विषयमा दुवैले धेरै महिनाअघिदेखि सल्लाह गरेर यस्तो निर्णय लिएका हुन्।
उनीहरूले २०१८ को अक्टूबरमा नै विभिन्न टेलिभिजनहरूले लिएको अन्तर्वार्तामा यसको बारेमा केही संकेत गरेका थिए।
त्यसबेला राजकुमार ह्यारी र मेगन अफ्रिका भ्रमणमा थिए। सोही समयमा उनीहरूमाथि एउटा डकुमेन्ट्री पनि बनेको थियो। जब उनीहरूको डकुमेन्ट्री टिभीमा सार्वजनिक भयो, त्यसबेलादेखि नै उनीहरूको रुची स्वतन्त्र रुपमा आम मानिसले झैं जीवनयापन गर्ने थियो भनेर उनीहरूले बताउँदै आएका छन्।
क्यानडाको लामो बसाइपछि बेलायत फर्किएका उनीहरूले एक्कासी आफ्नो बहिर्गमनको घोषणा गरे, जुन राजपरिवारलाई झड्का साबित भयो। अप्रत्याशित रुपमा गरिएको यति ठूलो निर्णयका बारेमा राजपरिवारका अन्य सदस्यसँग कुनै सरसल्लाह थिएन। यो निर्णयबाट खासगरी महारानी एलिजावेथ स्तब्ध भइन्। राजपरिवारलाई चोट पुग्यो।
घोषणा भएकै दिन बकिङघम दरबारले एक वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै भन्यो, ‘उनीहरूको फरक धारमा रहेर जीवन व्यतित गर्न चाहने लक्ष्यलाई हामीले बुझेका छौं। तर, बिनासल्लाह यति ठूलो निर्णय गर्नु उचित होइन। यसमा लामो बहसको आवश्यकता छ।’
यसैक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यस विषयमा सोधिएको प्रश्नमा मेगनले आफूहरूले यसविषयमा पूर्वतयारी गरेरै निर्णय लिएको बताएकी छन्। ‘धेरै महिनादेखिको छलफलबाट नै हामीले यस्तो निर्णय लिएका हौं,’ मेगनले भनिन्, ‘हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं, मैले पहिलेदेखि नै ह्यारीलाई भन्दै आएकी छु, जिन्दगी ज्युनुमात्रै जीवनको उद्देश्य होइन।’
यस्तो निर्णय लिनुको पछाडि अरु पनि कारण भएको आशंङ्का गरिएको छ। गतवर्षको अक्टूवरमा मेगनको व्यक्तिगत इमेल कुनै एक स्थानीय अखवारमा सार्वजनिक भएपछि उनी कानुनको ढोका ढक्ढक्याउनसम्म पनि पुगेकी थिइन्।
त्यसबेला ह्यारीले भनेका थिए, ‘सानै उमेरमा आमा गुमाएँ। आमाको मृत्युपछि मानसिक समस्याको सामना गर्दै आएँ। अहिले फेरि आफ्नी पत्नी गुमाउन चाहन्नँ। सँधै मिडियाको आँखामा परिरहनु मेरो रुचीको विषय होइन, मानिसहरूले कुनै एउटा भौतिक वस्तुको रुपमा मात्रै हेरिरहनु मेरा लागि सर्वथा अनुचित छ।’ उनले अरुको व्यक्तिगत कुरामा धेरै चासो नदिन मिडियाहरूलाई आग्रहसमेत गरेका थिए।
के हुन सक्छ बहिर्गमनको कारण?
उनी राजपरिवारको वरियताक्रममा छैटौं स्थानमा छन्। कतिपय मानिसहरूले यसैलाई नै उनको राजपरिवारको आफ्नो जिम्मेवारीबाट बाहिरिएको विषयसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। तर, यस विषयमा राजकुमार ह्यारी भने मौन बसिरहेका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक रुपमा प्रशंसनीय अथवा आलोचित भएर बस्नुभन्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा रमाउनु नै उचित भएकाले नै उनले बहिर्गमनको बाटो अङ्गालेका हुन्।
केही मानिस भने उनकी श्रीमती मेगनका कारण उनीहरूले सो निर्णय लिएको बताउँछन्। गत वर्ष आफ्नो व्यक्तिगत इमेल सार्वजनिक भएसँगै उनमा यसप्रति वितृष्णा जागेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। उनको व्यक्तिगत विषय सार्वजनिक गरेको भन्दै बेलायतको उच्च अदालतमा दी न्यूज‚ न्यूज अफ द वर्ल्ड र द डेली मिरर् नामक समाचार संस्थावरुद्ध उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्।
उनीमाथि यस विषयलाई लिएर गरिएको नकारात्मक टिप्पणी ह्यारीलाई चित्त नबुझेको कारणले पनि उनी यो निर्णयसम्म पुगेको हुनसक्ने आशंका धेरैले गरेका छन्।
उनको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजपरिवारमा आफ्नो भूमिकाबाट नै अलग हुने निर्णय गर्नु राम्रो नभएको विश्लेषण पनि प्रशस्तै गरिएका छन्। कतिपयले भने अमेरिकामा जीवन व्यतित गरेकी मेगनले राजसंस्थामा टिक्न नसकेको भनी टिप्पणी गरेका छन्।
राजकुमार ह्यारी उनका दाजु राजकुमार विलियम झैं मिडियालाई फेस गरिरहने स्वभावका छैनन्। त्यसैले पनि यसरी सार्वजनिक रुपमा अगाडि आइरहनुभन्दा आफ्नै एउटा नयाँ च्यारिटी संस्थाको उद्घाटन गरी सोही संस्थाको प्रमुखको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने लक्ष्यमा रहेको बताइएको छ।
यस्तो आकस्मिक रुपले राजपरिवारका सदस्यहरू नै आफ्नो भूमिकाबाट बाहिरिन थालेपछि कतै ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ पो हो कि? भन्ने आशङ्का पनि गरिएको छ। उनलाई नै उदाहरण मानेर अरुले पनि यस्तै निर्णय गर्न थाले भने कतै राजसंस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने त होइन? भन्नेजस्ता विभिन्न विश्लेषणहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्।
यसका साथै उनीहरूले आगामी दिनहरूमा साना मिडियाहरूसँग बढी सम्पर्कमा रहनेसमेत निर्णय गरेका छन्। दुवैले राजपरिवारमा आफ्नो भूमिकाबाट अलग भए पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल आदिका माध्यमबाट सम्पर्कमा रहिरहने बताएका हुन्।
गत वर्ष राजकुमार ह्यारीले सेनाको कामकाजबाट पूर्ण रुपमा अवकाश लिएर क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बियामा समय व्यतित गरेका थिए। उनलाई दाजु विलियमको जस्तो राजसंस्थाको कुनै पनि कार्यक्रमको वास्ता थिएन। उनमा सँधै एक साधारण व्यक्तिको रुपमा जीवन जिउने चाहना रहेको उनका समकक्षीहरूले बताएका छन्।
सो विषयलाई लिएर अहिले राजपरिवारमा विभिन्न छलफलहरू भइरहेका छन्। हालैमात्र राजपरिवारको सामूहिक छलफल बसेर उनलाई यस्तो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ। यस्तो निर्णयप्रति उनका बुबा‚ युवराज चार्ल्स र उनका दाइ विलियमलगायतले पनि ह्यारी दम्पतिलाई राजपरिवारको जिम्मेवारीमा फर्किन आग्रह गरेका छन्।
अबको उनको बाटो कस्तो रहनेछ भन्ने बारे त समयले नै बताउला तर अचानक उनले गरेको यस्तो अप्रत्याशित निर्णयले विश्वको ध्यान भने तानिरहेको छ।
(बीबीसी, सीएनएन, डेलीमेललगायतका समाचार संस्थाहरुको सहयोगमा)
भिभो किन हट्यो आइपिएलको मुख्य प्रायोजकबाट?
सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ [फोटो फिचर]
दुई वर्षपछि मात्रै आउँछ एनसेलको आइपिओ
काेराेना महामारी : विश्वमा प्रत्येक १५ सेकेण्डमा एक जनाकाे मृत्यु काेराेना भाइरसका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेकाे संख्या ७ लाख नाघेकाे छ। अमेरिका, ब्राजिल, भारत र मेक्सिकाेमा सबैभन्दा बढी मानिसकाे काेर... बुधबार, साउन २१, २०७७
भारतमा काेराेनाबाट मृत्यु भएकामध्ये ५० प्रतिशत ६० वर्षमाथिका व्यक्ति भारतकाे संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रालयका सचिव राजेश भूषणले मंगलबार सार्वजनिक गरेकाे तथ्याङ्क साे उल्लेख छ। उनले भने, 'कोभिड–१... बुधबार, साउन २१, २०७७
पाकिस्तानको नयाँ नक्साबारे भारतको प्रतिक्रिया-हाँस्यास्पद र कानुनी रुपमा अवैध पाकिस्तानले कश्मीर, लद्दाख, जूनागढसहितलाई समेट्दै राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि भारतले त्यसलाई हाँस्यास्पद भनी टिप्पणी गरेको छ। भारतीय... बुधबार, साउन २१, २०७७